Soo Saaraha Timaha ugu Fiican HS-8006 iyo Warshad | Tingxuan
Super siman: TINX buriyaha toosinta timaha wuxuu isku daraa tikniyoolajiyadda ion ee ugu casrisan leh dhoobada dhoobada ah si uu kuu siiyo muuqaal cajaa'ib leh oo dhalaalaya. Muraayadaha dhoobada leh, ma libdhi doono xitaa haddii loo isticmaalo 5 milyan oo jeer.
Samee timo dhaldhalaalaya: naqshaddiisa ilkaha oo ballaadhan awgeed, awgeed, waxaad timaha ugu cadaadin kartaa daqiiqado yar gudahood, taas oo ka duwan ta toosiyaha dhaqameed. Burushkan toosinta timaha ayaa xitaa kordhin kara mugga baangadaha.
Kuleyliyaha degdegga ah ee Ultra: burushka toosinta timaha ee furiden waa lagu kululeeyaa heerkulka bartilmaameedka waqtiga la duubay iyada oo aan lumin waqtiga. La dhaqan timaha fudud ee tooska ah isla markaana yaree waqtiga ay ku qaadaneyso qaabeynta timahaaga.
Ku sagootinta gubashada: In kasta oo burushka timaha toosan loo kululayn karo ilaa 400 ° F, haddana tiknoolajiyada ka hortagga gubidda iyo caaradda kulaylka u adkaysta buraashka ayaa madaxaaga ka ilaalin doonta kuleylka.
Ku habboon dhammaan noocyada timaha: furiden ion toosan burushka timaha ayaa ku habboon nooc kasta oo timo ah. Sababtoo ah kala duwanaanta heerkulka baaxadda leh, waxaad u isticmaali kartaa shanlo toosan timaha qaro weyn iyo kuwa qalloocan, timo khafiif ah oo khafiif ah iyo wax kasta oo u dhexeeya.
Lambarka Moodalka HS-8006
Nooca kululeeyaha PTC
Muujinta Heerkulka LED
Heerkulka 140 ℃ 、 160 ℃ 、 180 ℃ 、 200 ℃
Qalabka Ilkaha Caag ah
Qalabka wax lagu qabto Caag ah
Isticmaal Hoyga / salon / safarka
Shaqaynta Shanlo + Timo jilicsan + Duug masax
Isticmaalka Safarka Gudbinta Salonka Guriga
Muuqaalka Raaxeeye Caafimaad leh oo raaxo leh
Length Power Power 2.5M
Qaabka Timaha shanlo
1. Heerkulka hawleedku waa 176 ° F ilaa 446 ° F (80 ° C ilaa 220 ° C), oo la mid ah heerka birta ee timo qurxinta timo xirfadeed leh.
2. Waxqabadka Kuleylka Degdega ah: Waxaa lagu kululeeyaa 180 ° C 1 daqiiqo gudahood. Heerkulka 16 heerkulka la hagaajin karo wuxuu ku habboon yahay ballaaran kala duwanaanta timaha.
3. Shaqada Beddelaadda Qeybta Heerkulka: Taabo oo hayso batoonka "+" ama "-" 3 ilbidhiqsi si aad ugu bedesho Celsius iyo Fahrenheit.
4. Waxqabadka Qufulka Heerkulka: Riix batoonka awoodda 1 ilbidhiqsi ka dib dejinta heerkulka badeecada, waad haysan kartaa dejinta heerkulka inta lagu jiro isticmaalka.
5. Waxqabadka Xusuusta Heerkulka: Kadib marka heerkulka ku habboon la dejiyo, heerkulka caadiga ah ee isticmaalka soo socda ayaa ah dejinta.
6. Badhannada fudud: Badhanka awoodda, heerkulka "+", badhanka heerkulka "-".
7. Shaqada otomaatiga ah: Badeecadan ayaa si otomaatig ah u damin doonta 30 daqiiqo kadib hawlgal la'aan.
8. Heerkulka Hore ee Bilowga ah: 302 ° F (140 ° C)
3 mid ah 1 Styler kulul hawada caday qalalan
Cabirka Sanduuqa Hadiyadda: 40.5 * 14 * 9 CM
Cabirka kartoonka: 44 * 38 * 42 CM
Cutubka Master Carton: 12PCS
Dhererka Xadhka Awoodda: 2.5M
Toosan Super - Naqshadeynta Hawada Sanduuqa
Tiknoolajiyadda Generator Ka ilaali timahaaga dhaawaca, waxayna timahaaga ka dhigeysaa kuwo dhalaalaya oo dhalaalaya.
Ku qabooji qaabka
oo ay sii dheeraato
cufnaanta sare iyo ilkaha anti-burncomb, oo si fudud loo fahmi karo timahaaga, ka dhig timahaaga mid quruxsan oo dhalaalaya
ilkaha shanleyda cufan, fudeyd gubasho, awood u lahayn inay qabsadaan timaha, wax saameyn ah kuma yeelan isticmaalka ka dib.
Codsi: Qoyska, Saldhiga Timaha, Saloolka Qurxinta, Hoteelka, Hoyga, iwm
OEM & ODM: La aqbali karo
Nooca Xirmada: Sanduuqa Hadiyada
Kartida Bixinta: 150000 Cadad / Cadad Bishii
Suuqyada Waaweyn ee Dhoofka: Yurub, Waqooyiga Ameerika, Aasiya, Bariga Dhexe, Afrika, Australia, Baraasiil, iwm
Nooca Ganacsiga ： Soo-saare
Waxyaabaha Ugu Muhiimsan: timaha hagaajiya, timaha qallooca, burushka toosinta timaha, iwm
Dalka / Gobolka: Zhejiang, Shiinaha
Lahaansho: Milkiile Gaara
Tirada Shaqaalaha: 400-450
Sanadka la Aasaasay: 2006
Wadarta Dakhliga Sannadlaha ah: qarsoodi ah
Caddaymaha alaabta: EMC, CCC, ROHS, CE
Shatiyadaha: Muuqaalka kore wuxuu naqshadeeyaa shahaadada shatiga
Suuqyada Waaweyn ee Dhoofinta: Yurub, Waqooyiga Ameerika, Aasiya, Bariga Dhexe, Afrika, Australia, Baraasiil, iwm
Faa'iidada Tartanka Aasaasiga ah
1.Waxaanu leenahay 15 sano oo waayo-aragnimo xirfadeed ah soo saaraha timaha hagaajiyaha, timo curiyaha iyo burushka toosinta timaha.
Waxaan leenahay koox cilmi baaris iyo horumarineed si aan ula kulanno baahidaada wax soo saar.
Qiimaheena 3.Our waa macquul wuxuuna ilaaliyaa tayada ugu sareysa macaamiisha kasta.
4.Waxaan siinaa qalab tayo sare leh timaha loogu talagalay shirkado badan oo adduunka caan ka ah.
Hore: Burushka Timaha Toosan HS-686A
Xiga: Timaha Curler S201
Burushka Timaha Toosan HS-686A